ဇူလိုင်လအတွင်းရိုက်ကူးမယ့် နာမည်ကြီးမင်းသား ၉ ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းများ (၁) | Asia News Bar
ဇူလိုင်လအတွင်းရိုက်ကူးမယ့် နာမည်ကြီးမင်းသား ၉ ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းများ (၁)
တရုတ်ထုတ်လုပ်ရေးကနေ ဇာတ်လမ်းပေါင်းများစွာကို နာမည်ကြီးတွေနဲ့ ရိုက်ကူးနေတဲ့အမျှ ပရိသတ်တွေရဲ့ကြည့်လိုအားကလည်း နေ့တိုင်းလောက်တိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လအတွင်း ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ နာမည်ကြီးမင်းသားတွေပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
The Light of My Life – Luo Yunxi
Luo Yunxi နဲ့ Wu Qian တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေး The Light of My Life ကတော့ ဇူလိုင်လမှာစတင်ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာတော့ Yunxi ဟာ ရှေ့‌နေတစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ Wu Qian နဲ့ သုံးကြိမ်မြောက်တွဲဖက်ရိုက်ကူးတော့မယ်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ကြားကအတွဲညီနေမှုကြီးကို ပရိသတ်တွေက စောင့်နေကြပါတယ်။
Legend of Anle – Gong Jun
ဇူလိုင်လအတွင်းရိုက်ကူးမယ့်ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ Youku ရဲ့ ရှေးဟောင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲ Legend of Anle လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ထိပ်တန်းမင်းသမီး Diliraba Dilmurat နဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသား Gong Jun တို့က ရိုက်ကူးပုံဖော်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့် ရိုးအီပြီးအက်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ တခြားသောရှေးဟောင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ကွဲပြားသွားအောင် ဘယ်လိုမျိုးတမူထူးခြားပြီးရိုက်ကူးမလဲဆိုတာကို မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
Extraordinary Healer – Wang Junkai
TFBoys ရဲ့ Karry Wang Junkai ကတော့ အနောက်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့ The Good Doctor ကို တရုတ်ဗားရှင်းနဲ့ ရိုက်ကူးမယ့်ဇာတ်လမ်း Extraordinary Healer မှာ ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Idol တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက် ဒီဆရာဝန်ဇာတ်ကောင်ကို Junkai အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးရိုက်ကူးသွားနိုင်မလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
Flight to You – Wang Kai
Wang Kai နဲ့ Tan Songyun ကတော့ လေယာဉ်မောင်းအတတ်သင်တန်းမှာ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ စီနီယာ-ဂျူနီယာဆက်ဆံရေးကနေ အချစ်တစ်ခုပေါက်ဖွားလာတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးစပ်လွန်းတဲ့ လေယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းအကြောင်းကို Romantic ဆန်ဆန်‌ရိုက်ကူးမှာဖြစ်တဲ့ Flight to You ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဇာတ်အိမ်နဲ့ဇာတ်ညွှန်းက တမူထူးခြားနေပါတယ်။
Next မှုခင်းရုပ်ရှင်ကားမှာ တွဲဖက်သရုပ်​ဆောင်ဖို့ ​ဆွေး​နွေး​နေကြတဲ့ Joo Ji Hoon နဲ့ Han So Hee »
Previous « နှစ်ပတ်အတွင်း Subscribers 1M ကျော်ခဲ့တဲ့ J-Hope အမဖြစ်သူ Jung Dawon ၏ YouTube Channel
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း Weibo မှာ အချိန်အတော်ကြာ နေရာယူထားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးအနုပညာရှင် ၂၀ ဦး
Zhou Xun နဲ့ Wang Yibo တို့ရဲ့ ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ချစ်ရသူတွေကို လွမ်းကြည့်ရအောင်
၂၀၂၀အတွင်း Douban မှာ လူအများအပြားစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတဲ့ တရုတ်အနုပညာရှင် ၂၀ ဦး
“Douluo Continent”ရဲ့ Trailer ကြည့်ပြီးကြပြီလား? Xiao Zhan ကို​ကော မကြွေပဲနေနိုင်ကြရဲ့လား?
မကြာခင်ထုတ်လွှင့်တော့မဲ့ တရုတ် မင်းသားချောလေး Xiao Zhan ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်
၂၀၂၁ အတွင်းကြည့်ရမယ့် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်း ၇ ခု (အပိုင်း ၁)